Filoha Rajaonarimampianina:“MILA MIFANOME TANANA ISIKA” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Rajaonarimampianina:“MILA MIFANOME TANANA ISIKA”
Ao anatin’ny fampandrosoana ny firenena malagasy tanteraka ny fitondram-panjakana mijoro amin’izao fotoana izao. Betsaka ireo fanamby napetraka izay efa tratra, betsaka koa anefa ireo mbola ho tratrarina entina hampandrosoana an’i Madagasikara. Tsy andraikitry ny Filoham-pirenena irery anefa izany, na ihany koa an’i fitondram-panjakana irery fa andraikitry ny tsirairay. Mba hahatongavana amin’izany, ny fifanomezan-tanana ny rehetra ihany no vahaolana. Ary nanamafy izany ny tenin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, tany Toliara, ny herinandro teo nandritra ny kabariny nanao hoe, “Mila miasa isika. Mila mifanome tanana isika. Tsy maintsy ao anatin’ny fampihavanam-pirenena no hampandrosoana ny firenena fa tsy ao anatin’ny fifanenjehena, tsy ao anatin’ny adilahy pôlitika etsy sy eroa.”
Niantso ny vahoaka malagasy ny Filoha, noho izany, mba ho anatin’ny fihavanana no hanorenana ny firenena. “Miantso anareo aho, miantso anareo tanora, miantso anareo vehivavy, miantso ny mpanao politika. Ahoreno ao anatin’ny fampandrosoana ny firenena, izany fihavanana ao anatin’ny fiaraha-monina izany. Ary izay no ilazako foana, fa tsy maintsy mifanome tanana isika hihazakazaka hampandroso ity firenena ity”, hoy hatrany ny Filohan’ny Malagasy Rajaonarimampianina Hery. Satria ao anatin’ny fitoniana hatrany no hamahana olana mba hialan’ny firenena amin’ny fahantrana mianjady aminy amin’izao. Ao antin’ny fitoniana izay hatrany koa no hahafahana maka ny fitokisan’ny mpiara-miombon’antoka, izay isan’ny andry lehibe manampy an’i Madagasikara amin’ny fanarenana ny firenena izay tafahitsoka lalina amin’ny fahantrana vokatry ny Tetezamita mifanesy eto amintsika.
Ary amin’izao niverenan’ny fitokisan’ny fiaraha-monina iraisam-pirenena amin’i Madagasikara izao, zava-dehibe ny hitazomana izany satria fototra hiaingan’ny fampandrosoana. Vokatr’izay fitokisana izay hatrany, betsaka ireo manampy an’i Madagasikara. Tafiditra amin’izany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ny mpamatsy vola, ny mpampiasa vola amin’ny sehatra tsy miankina izay vonona hiara-hiasa amintsika hampandroso ny firenena ary porofon’izany ireo foto-drafitrasa mitsangana sy ireo ao anatin’ny fanatanterahana ary ireo mbola hatsangana miaraka amin’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena.
Tao anatin’ny hakiviana sy ny fahadisoam-panantenana tanteraka ny vahoakan’Antananarivo. Naely ny tsaho fa nosakanan’ny Filoha sy ny fitondrana hono ny ranon’orana nandritra ireny COMESA sy ny Frankofonia ireny. Natao daholo izay nandotoana ny Filoha sy ...Tohiny